Mpempe akwụkwọ nke ụlọ mkpọrọ: nkuzi nke Ptahotep - Afrikhepri Fondation
Na-agụ: 22 min
Lihe omuma ihe omuma putara n’Ijipt dika puku aro nke ato BC n’udi “nkuzi” site na nna rue nwa ya nwoke. Ọ bụ banyere mmụta ibi ndụ dịka echiche bụ isi nke ịdị adị n'Ijipt oge ochie: Ma'at. Muta ibi ndu dika Ma'at si di. Ebumnuche nke echiche ndị Ijipt na narị afọ iri atọ nke BC bụ ịtụrụ ndụ na-ekwekọ na Ma'at dị ka ihe mmụta, dabere na ahụmịhe nke ndị nna nna ochie, ọ bụghị dịka iwu Chineke gosipụtara. N'ihi ya, onye mbụ kwupụtara "nkuzi" ya, dị ka ọdịnala si dị, bụ Imhotep a ma ama (ihe dị ka 3 BC), onye na-echepụta ihe owuwu ihe owuwu, onye wuru pyramid eze. Djoser (usoro nke atọ) na Saqqarah. Ozizi Ptahhotep bu ederede zuru oke, nke edere site na ndi ozo. Ihe zuru oke bụ nke Papyrus Prisse (Paris, Bibl. Nat. De France) nke sitere na usoro iri na abụọ (ihe dịka afọ 3-2660 BC). O n’egosiputa echiche zuru oke nke ndi amamihe nke Egypt nke puku aro nke ato.
Nke ịdị umeala n'obi na nchọpụta okwu zuru oke
O we si nwa-ya, Ka obi-gi ghara idi irè n'ihi ihe i mara; soro ndị na-amaghị na ndị ọkà mmụta sayensị kwurịta okwu, n'ihi na otu anaghị eru ókè nkà, ọ dịghịkwa onye ọrụ ọkaibe nke meworo ka ọ bụrụ izu okè. Okwu zuru okè zoro ezo karịa nkume na-acha akwụkwọ ndụ; ma a na-achọta ya n'akụkụ ụmụ agbọghọ ndị na-arụ ọrụ na nkume igwe nri.
Nkà nke arụmụka na onye ka elu
Ọ bụrụ na ị na-ezute onye arụmụka na-eme ihe, onye na-eduzi obi ya ma nwee nghọta karịa gị, gbanye ogwe aka gị ma gbanwee azụ gị; unu amaghi obi unu megide ya n'ihi na unu agaghi adota ya. Ka ị belata onye na-ekwupụta onwe ya site n'ịghara imegide ya mgbe ọ na-eme ihe; Nke a bụ otú a ga-esi kpọọ ya dịka onye na-amaghị ihe ozugbo obi gị kwụsịrị ya.
Nkà nke arụmụka na nha anya
Ọ bụrụ na ị ga - ezute onye na - arụ ụka, gị na onye ahụ nọ n'akụkụ gị, mee ka ịchọọ gị dị elu site n'ịnọ jụụ, ọbụna mgbe ọ na - ekwu okwu ọjọọ. Ndị na-ege ya ntị ga-eche ọtụtụ ihe banyere ya, ebe aha gị ga-ezu okè n'obi ndị ukwu.
Nkà iji arụmụka baa uru
Ọ bụrụ na ị na-ezute onye na-arụ ụka, ọ bụ mmadụ ole na ole bụ ndị na-abụghị otu gị, obi gị anaghị eme ihe ike megide ya n'ihi adịghị ike gị. Debe ya n'ala, ma ya onwe ya ga-ata onwe ya ahụhụ. Ejila ya zaa ka obi di gi mma, emela obi gi n'ihi onye na-emegide gi. Nhụsianya bụ onye na-ewute mmadụ ole na ole. Anyị na-achọ ime ihe kwekọrọ n'ihe ịchọrọ, ị ga-egbukwa ya na enweghị ihu ọma nke nnukwu.
Nkà nke ịbụ onye siri nri mgbe ị na-asọpụrụ iwu
Ọ bụrụ na ị bụ onye nduzi, nyere gị ntụziaka ịnye ntụziaka maka ọtụtụ ndị, na-achọ gị ohere ọ bụla iji rụọ ọrụ nke ọma, ka ụzọ ị chịkwaa na-ada ada. Ọchịchị dị ukwuu, na-adịgide irè. O nweghi nsogbu site n'oge Osiris. Onye na-ata onye na-emebi iwu iwu, ọ bụrụgodị na njehie a bụ eziokwu nke onye nwere obi mgbawa. Inwe omume ezighi ezi nwere ike ijide oke, ma ihe ojo agaghi eme ka ahia ya gaa njem ya. Onye na-eme ihe ọjọọ na-asị: Ana m enweta onwe m; ọ naghị ekwu: Enwetara m maka abamuru nke ụlọ ọrụ m. Mgbe njedebe batara, iwu ahụ ka dị. Nke a bụ ihe onye ezi omume na-ekwu: nke a bụ ngalaba nna m ime mmụọ.
Nke ihe efu nke mmadu
Etinyela aka na nkata imegide ụmụ mmadụ, n'ihi na Chineke na-ata ha ahụhụ. Ka mmadụ kwuo, sị, "M ga-adị ndụ otú a,” + Ọ ga-abụkwa agụụ n'ọnụ ya. Ka nwoke kwuo "m ga-aba ọgaranya", mgbe ahụ ọ ga - asị "nghọta m amatala m". Ka nwoke kwuo "M ga-ezu ohi ọzọ" na, n'ikpeazụ, ọ na-enye onyinye nye onye na-amaghị! Ihe ụmụ mmadụ na-emezughị, ọ bụ ihe Chineke nyere n'iwu ka a na-emezu. Chee echiche banyere ibi n'udo na ihe ị nwere na ihe ha ga-eweta n'onwe gị.
Ọ bụrụ na ị bụ nwoke bụ otu n'ime ndị nọ na tebụl nke ka gị mma, nabata ihe ọ na-enye, otu esi etinye ya n'ihu imi gị. Lee ihe dị n'ihu gị, agbasapụla onwe gị site n'ọtụtụ anya; ọ bụ ihe arụ nke na ka a ga-emegharị. Ekwula ya okwu tupu ya akpọ gị; anyị amaghị ma ọ bụrụ na ọ nọ n'ọnọdụ ọjọọ nke obi. Na-ekwu mgbe ọ na-agwa gị okwu, okwu gị na-eme ka obi nwee obi ụtọ. Banyere ndị toro ogologo, nọ ọdụ n'azụ achịcha ndị ahụ, na omume ya kwekọrọ na ntụziaka nke ya. Ọ ga-enye onye ọhụụ onyinye; ọ bụ omenala n'abalị. Ọ bụ onye na-agbasa aka ya. Onye buru ibu na-enye onyinye nye onye ruru ogo nwoke. A na-eri achicha dị ka uche Chineke si dị, ọ bụ onye na-amaghị ama ga-eme mkpesa.
Nkwanye ùgwù maka ọrụ e nyefere
Ọ bụrụ na ị bụ nwoke nwere obi ike, onye nnukwu nwoke na-ezigara nwoke ukwu, mara ya nke ukwuu mgbe ọ na-ezitere gị; na-ezigara ya ozi ahụ dị ka ọ kwadoro, na-egbochi ịkwado okwu ndị a, n'ihi na ị na-atụ egwu na ị na-agba chaa chaa buru ibu buru ibu. Jidesie ike na iwu ahụ, emela ya ka ọ ghara imebi ya; ekwesighi imeghari ya n'obi. Ekwula okwu megide onye ọ bụla, nnukwu ma ọ bụ obere, ọ bụ ihe arụ nke ka.
Nke nkpa di nkpa nke ndi ogaranya na obi uto nke ndi n'enweghi umu
Ọ bụrụ na ị na-akọ ubi, ma ọ bụrụ na uto na-ewere ọnọdụ n'ọhịa, n'ihi na Chineke na-enye ya n'ụba n'aka gị, enwela ọnụ ya na mpaghara gị, n'ihi na i nwere nkwanye ùgwù dị ukwuu maka mkpọtụ ahụ . Ọ bụrụ na onye nwere àgwà nwere ihe onwunwe, ọ na-eme ihe omume dị ka crocodile, ọbụna n'ụlọ ikpe. Emela mkpesa banyere onye na - enweghị nwa, akatọla ịghara ịmụ ụmụ, atụla ọnụ maka inwe ha; ugbua ugbua nna nwere nhụjuanya, yana otutu ndi nne ndi muru, ebe nwa ozo n'enweghi ike karia ya. Ọ bụ onye ahụ bụ naanị onye chi ya na-enye ohere ka ọ gbanwee, ebe onyeisi ezinụlọ na-ekpe ekpere ka anyị weghara ya.
Otu ọ dị mkpa ịtụkwasị mmadụ obi
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-adịghị ike, m bụ nwoke nwere àgwà, kwesịrị inwe obi ike; omume gị niile ga-adị mma n'ebe Chineke nọ. Ọ bụrụ na ị matara na nwoke a dị umeala n'obi n'oge gara aga, enwela obi dị mpako n'ebe ọ nọ, n'ihi ihe ị maara banyere ọnọdụ ya. Na-atụ egwu ya dịka ihe mere ya si dị, n'ihi na ihe anaghị esite n'aka ha. Banyere opulence, ka àgwà mmadụ nweta ya n'onwe ya. Ọ bụ Chineke na-eme ya ka ọ bụrụ onye dị mma ma na-echebe ya, ọbụna mgbe ọ na-ehi ụra.
Nke ọ dị mkpa ka mmadụ soro obi ya mee ma ghara iji ike ya niile rụọ ọrụ ego
Soro obi gị n'oge nke ịdị adị gị, emela ihe gafere n'ihe edere edere, egbula oge iji soro obi gị. Iji mebie oge ọ na-arụ bụ ihe arụ nke ka. Emela ihe ọ bụla ị na-eme kwa ụbọchị maka ụlọ gị. Mee ihe na-aga n'ihu, gbasoo obi m; ihe agaghị aba ndị na-enweghị nchebe.
Omume megide nwa ime mmụọ
Ọ bụrụ na ị bụ nwoke nwere àgwà ị nwere ike ịtụkwasị obi, ị nwere ike ịmepụta nwa ime mmụọ na ihu ọma Chineke. Ọ bụrụ na ọ bụ onye ezi omume ma ọ bụrụ na ọ kwadoro ụdị omume gị, ma ọ bụrụ na ọ na-elekọta ngwaahịa gị n'ụzọ ziri ezi, mee ụdị ihe ọma ọ bụla maka ya. Ọ bụ nwa gị, ọ bụ mkpụrụ nke gị. Ekewapula obi gi. Ma mkpụrụ nke mmadụ pụrụ ịkpata esemokwu. Ọ bụrụ na ọ na-eje ije na-ezighi ezi, ma ọ bụrụ na ọ na-emebi iwu gị, ọ na-enupụkwa isi n'ihe niile a na-ekwu, ma ọ bụrụ na ọnụ ya kwupụta okwu ndị jọgburu onwe ya, chụọ ya, ọ bụghị nwa gị. Mee ka ọ rụọ ọrụ maka okwu ya dum. Onye na-emegide gị ga-ata ahụhụ na-adịghị ha mma, a na-emechi ihe mgbochi mgbe ọ nọ n'afọ. Onye ha na-eduzi agaghị akpafu, onye ha na-anapụ ụgbọ mmiri agaghị agafe.
Site n'àgwà gaa n'ụlọ ikpe nke ikpe ziri ezi
Ọ bụrụ na ịchọta onwe gị na ihe owuwu ụzọ mbata ebe a na-eme ikpe ziri ezi, guzoro ma ọ bụ nọdụ ala, dịka usoro ahụ si dị, nke e mere n'ụbọchị mbụ. Enweghị ike ịkwanye ya, ị ga-akwaghachi azụ. Ntughari ga-abụ onye na-abanye mgbe e kwusịrị ya ọkwa, ebe dum bụ oche nke onye a kpọrọ. Ihe owuwu ụzọ mbata ebe ikpe ziri ezi na-eme dị ka nzi; omume nile kwesiri ikwekọ na eriri eriri, ọ bụ chi na-ebuli oche ahụ. A gaghị etinye ndị na-akwụ ụgwọ nke ukwuu.
Nke obi na-eme gị obi ụtọ na afọ nke na-akatọ ọdachi
Ọ bụrụ na gị na ndị mmadụ nọ, gbalịsie ike ka nwoke a pụrụ ịtụkwasị obi nke ruru n’obi; onye rute na obi ya bu onye na adighi agabiga asusu di na ime ya. Ọ ga - abụ nwoke na - enye onwe ya iwu, onye nwere ezi ekele maka omume ya. Ka aha gi buru ezigbo ihe ma ikwughi ya. A ga-edozi ahụ gị, ihu gị ga-echigharịkwuru ndị ị hụrụ n'anya, a ga-enyekwa gị ihe ịmaghị. Obi nke onye na-ege ntị n'afọ ya ga-apụ n'anya; kama ihu-n'anya, ọ g arome ka nlelì bayere ya. Obi ga-agba ọtọ na-agaghị ete mmanụ. Onye nwere nnukwute obi bụ onyinye si n’aka Chineke, onye na-erubere afọ ya isi na-erubere onye iro isi.
Nkà nke ikwurita okwu
Nyefee ntuziaka gị na-enweghị iloda obi, ma chee echiche gị na ndụmọdụ nke nna gị ukwu. Ọ bụrụ na ọ na-ekwu okwu n'ụba, ọ gaghị esiri onye ozi ahụ ike ịkọ akụkọ, ma a gaghị aza ya: "Ònye bụ onye a gwara? ". Ma ndị ukwu, ihe onwunwe ya ga-ala n'iyi ma ọ bụrụ na ọ na-eche na ya ga-ata ya ahụhụ n'ihi ya, ya mere, ọ ga-emechi ọnụ "M kwuru."
Na nka nke ichi
Ọ bụrụ na ị bụ onye nduzi, ụzọ ị ga-esi na-achịkwa njem site na ihe ị nyere iwu. Ị ghaghị ime ihe dị elu. Chee echiche banyere ụbọchị ndị na-abịa n'ihu, na nsogbu adịghị eme n'etiti amara; dị ka agụ iyi na-apụta, enweghi obi ụtọ.
Nke ọ dị mkpa ige ntị na arịrịọ
Ọ bụrụ na ị bụ onye nduzi, gee ntị nke ọma na adres nke onye zitere gị akwụkwọ; emela ka o wepuo ya ruo mgbe o kpochapuru afo ya na ihe o na-eche n'echiche. Onye nke ochichi na-ezighi ezi juputara n'obi ya ka a sacha obi ya, karia imezu ihe o biara. Ma onye na-ajụ onye na-eziga arịrịọ, otu ga-asị "gịnị mere o ji jụ ha? Enweghị ike ịjụ ajụjụ ọ bụla, mana nge ntị ọma na-eme ka obi dị mma.
Nke ihe ize ndụ nke ịrata mmadụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ọbụbụenyi, n’ụlọ ebe ị nwere ọnụ ụzọ mbata gị, dịka nna ukwu, nwanne nwoke ma ọ bụ enyi, ma ọ bụ ebe ọ bụla ị nwere ọnụ ụzọ gị, kpachara anya ka ị ghara ịgakwuru ụmụ nwanyị. Ọ dịghị mma ebe eziokwu dị. Ọhụhụ ahụ anaghị adị nkọ mgbe ọ tụrụ ha. Ọtụtụ puku ụmụ nwoke ahapụwo ihe ga-abara ha uru. Oge dị mkpirikpi nke obi ụtọ, dị ka nrọ, na ndị nwụrụ anwụ ga-abịakwute gị maka akụ ndị a ma ama. Ọ bụ ọnọdụ dị njọ na: "ịmalite ọrịa strok megide onye mmegide"; mgbe mmadu na akwado iji mee otu a, ka obi ju obi a. Amaedi owo emi akade iso ke ndikpọn̄ enye, ke usụn̄itọn̄ esie, baba uduak esie kiet idikwe unen.
Anyaukwu: ọrịa na-enweghị ngwọta
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka omume gị dị mma, napụta onwe gị n'aka ihe ọjọọ niile; na-agbaso oge anyaukwu nke obi. Enwe anyaukwu bụ ọrịa siri ike nke enweghị ngwọta, na ịbanye na ọ gaghị ekwe omume. Anyaukwu na-agha nsogbu n'etiti ndị nna na ndị nne, na n'etiti ụmụnne nke nne, ọ na-ekewa nwunye site na di. Anyaukwu bu nzuko nke ihe ojo di iche iche; ọ bụ akpa nke nwere ihe niile na-akpọ asị. A jụrụ nwoke a ma ọ bụrụ na ọ na-etinye iwu ahụ n'ụzọ ziri ezi, ma na-aga n'ụzọ dịka usoro a ga-esi soro ya. N'ihi ya, ọ ga-eme ka ala nke ngwongwo ya, ebe obi anyaukwu agaghị enwe ili.
Nke ziri ezi echiche inwe
Ejila anyaukwu n'ihe banyere nkewa nke ngwongwo, buru nani ihe onwunwe nke aka gi. Enwela anyaukwu maka ndị ị hụrụ n'anya; ihe kariri karia bu ihe ziri ezi nke nwoke di nwayo karia onye na-ezighi ezi nke nwoke siri ike. Nke ikpeazụ, obere nke ndị ikwu ya, n'ihi na a napụrụ ya ihe na-eweta okwu ahụ. Obere anyaukwu bu ihe zuru oke iji muta mmuo nke nwoke na enwe afo oyi.
Nke ịhụnanya na nkwanye ugwu dịịrị nwunye
Ọ bụrụ na ị bụ nwoke dị mma, chọta ụlọ gị, hụ nwunye gị n'anya, jupụta afọ ya, dozie ya, mmanụ bụ ihe ngwọta maka ahụ ya. Gwa obi gị oge nke ịdị adị gị. Ọ bụ ala na-eme nri, nke bara uru maka nna ya ukwu. Ekpebirila ya, zere ike nke ga-apụnara ya ihe. Anya ya bụ ifufe; lee ya anya, ị ga-emekwa ka ọ nọrọ n'ụlọ gị. Ọ bụrụ na ị jụ ya, lee anya mmiri! Ikpu bụ otu n'ime ụdị ọrụ ya; ihe ọ na-eweta bụ na a ga-eme ọwa maka ya.
Nke mkpa igbo ndị ezinụlọ ya
Mee ka ndị enyi gị bụrụ ndị ị tụkwasịrị obi, site na ihe na-eme gị: nke a bụ akara aka nke onye Chineke hụrụ n'anya. N'ime onye na-egbochighi ezinụlọ ya mgbe nile ka ọ na-enwe obi ike, otu ga-asị "ọ bụ afọ ojuju n'onwe ya". A maghi ọdịnihu, ọ bụrụgodị na anyị nwere nkwenye nke echi. Ọ bụ ike okike, ikike nke okike nke jupụtara na ya. Ọ bụrụ na emeela otuto, ndị anụ ụlọ a tụkwasịrị obi na-asị, "Welcome! Mgbe ị na-eweta udo n'obodo ahụ, ị ​​ga-eweta anụ ụlọ ma ọ bụrụ na ọdachi dakwasị.
Nke ịjụ asịrị
Ejila ụda nkwutọ kwughachi, egela ya ntị. Nke a bụ ụzọ nke ekwupụta onye nwere ọkụ na-ere ọkụ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, megharịa azụmahịa ọjọọ ahụ ị hụrụ na ọ bụghị naanị nụ. Na akuko nkwutọ ahu adi n'ala, ekwula ya. Lee onye ọ bụla chere gị ihu ga-amata àgwà gị. Kwe ka enye ya iwu ka ijide ihe nkwugha nke nkwuwa okwu ahu; naanị ịkpọasị ka a ga-amụ, dị ka iwu si kwuo, megide onye ọ bụla ga-ejide ya iji ya. Lee, ọ bụ ajụjụ nke ibibi nrọ ọjọọ; chebe onwe gị.
Jiri okwu ahụ mee ihe nke ọma
Ọ bụrụ na ị bụ nwoke dị mma nke a tụkwasịrị obi, onye na-anọdụ na ndụmọdụ nke nna ya ukwu, chịkọta obi niile ka izu okè. Ghọọkwa, ọ bara uru karịa nkata. Na-ekwu naanị mgbe ị maara na ị ga-eweta ngwọta; ọ ghaghị ịbụ onye ọrụ aka, onye na-ekwu okwu na nnọkọ; ikwu okwu siri ike karịa ọrụ ọ bụla ọzọ. Ọ bụ onye na-akọwa ntụgharị okwu a nke nyere ikike okwu ahụ.
Ezi ike na njide onwe onye
Ọ bụrụ na ị dị ike, mee ihe ka anyị wee kwanye gị ùgwù, dịka ọmụma na udo nke asụsụ ahụ. Naanị nye iwu mgbe ọnọdụ chọrọ. Ntughari bellicose na-eme ihe ọjọọ. Emela ihe efu, a gaghị ewelata gị. Emela ihe efu, ma lezie anya ịzọ ụkwụ, na ịzaghachi okwu na ire ọkụ. Si n'ebe ihu gị pụọ, chịkwaa onwe gị, ire ọkụ nke onye ọ bụla nwere obi dị ọkụ na-eme ka ọ daa mbà. Iji bido n'ihu, a na-ewu ụzọ ahụ. Onye na-ewute obi, n'ehihie, agaghị arụ ọrụ ọ bụla nwere obi ụtọ. Onye obi-ya nādighi nma agaghi-achọta ulo. Onye na - enwetazu zuru ezu dịka onye na - ejide ube, mgbe ọ na - emetụ ala. A na-ewere onye nke ọzọ mkpọrọ. Onye na-erube isi n'obi ya ga-edozi.
N'elu iji ike
Akwụsịla ime ihe dị ukwuu, emela ka iwe nke onye ahụ dị arọ buru ibu, n'ihi na iwe ga-apụta megide onye na-alụ ọgụ ya. Nweta ikike ime ihe, onye na-ahụ ya n'anya mgbe niile. Onye naenye ike di nime Chineke, ihe o huru n'anya ga-emezu maka ya. Ma gị onwe gị, mee ka ihu gị kpuchie ihu mgbe ọnwa gbawara; udo sitere n'ike ike ya, iro nke onye iro. Ọ bụ ike na-eme ka ịhụnanya na-eto eto.
Ike nke ukwu
Kụziere mmadụ ukwu ihe bara uru nye ya, kpalie ya n'etiti ụmụ mmadụ, ka amamihe ya dakwasị nna ya ukwu. O sitere n'ike ya na ihe oriri a na-ekwu na ị si; afọ nke onye ihe-ya nātọ utọ juputara. A ga-eji ejiji mechie azụ gị. Ihe ndị a mere, na-echegbu onwe gị banyere ndụ nke ụlọ gị, dabere na ndị a ma ama ị hụrụ n'anya. Ọ dị ndụ n'ihi nke a, nakwa, karịa nke ahụ, ọ ga-enye gị nchekwa. Ọzọkwa, ọ bụ ịhụnanya ị na-akpali nke ga-adịgide n'ime afọ ndị hụrụ gị n'anya. Lee, ọ bụ onye hụrụ n'anya ịnụ ihe na-aga n'ihu.
Nke mkpa nke eleghị mmadụ anya n'ihu
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe, nwa nke onye ikpe ụlọikpe, onye ozi ebubo na-eme ka obi dị mmadụ mma, wepụ ihe na-enweghị isi nke akwụkwọ ederede. Mgbe ị na-ekwu okwu, echela otu akụkụ; lezie anya na ebubo ebubo a: "Ndị ikpe, ọ na-etinye okwu ya n'akụkụ nke dabara ya! »; mgbe ahụ, ihe ị ga-eme ga-eme ka ikpe gị megide gị.
Nke obi uto
O b ur u na i na-ekwu banyere otu okwu mere, meere mmad u ebere n'ihi na o nwere ezi obi. Gaa na nsogbu ya ochie, echetala ya, ebe ọ na-agbachi nkịtị n'ihu gị ụbọchị mbụ.
Nke dị mkpa site na ngwongwo ihe onwunwe
Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu mgbe ị ghọworo nwatakịrị, ọ bụrụ na ị na-eme ọgaranya mgbe ị nụsịrị ahụhụ n'oge gara aga, n'ime obodo ị maara, emela ka ị ghara ịkwa ákwá maka ihe mere gị tupu mgbe ahụ. Emela ka ntụkwasị obi nke obi gị tụkwasị n'ilekọta ihe onwunwe gị, n'ihi na ihe e nyere gị bụ onyinye si n'aka Chineke. Ị gaghị agbaso ụda olu ọzọ, nke ga-adị ndụ dịka ihe omume.
Àgwà ọma n'ebe onye ka elu na agbata obi nọ
Bọghachi azụ n’iru onye ka gị elu, bụ́ isi nke obí eze; ya mere, ebe obibi gị, ya na ngwongwo ya ga-adịte aka, ụgwọ ọrụ gị ga-adịkwa ebe kwesịrị ekwesị gị. Obi ụtọ na-adịrị onye na-emegide onye ka elu; n'ihi na mmadụ na-ebi ndụ naanị oge o mere ebere. Obi ụtọ na onye ogwe aka ya na-adịghị ehulata, mgbe ọ gba ọtọ. Apụnarala ụlọ ndị agbata obi gị ihe, apụkwala ngwongwo nke ndị nọ gị nso, ka ha ghara ịkọ gị, ruo mgbe ị ga-achọpụta. Ndị na-eme ihe ike bụ enweghị obi. Ọ bụrụ na onye agbata obi gị maara nke a, ọ ga-ekpe ikpe, maka na ọ bụ ihe ọjọọ ịwakpo agbataobi ahụ.
Nke dị mkpa iji zere nwanyị-nwa
Emela ka ị hụ nwa nwanyị n'anya, n'ihi na ị maara na anyị na-alụ ọgụ megide mmiri dị n'obi ya. Ihe di n'afọ-ya agaghi-eme ka o nwe ume; na ọ naghị anọ n'abalị na-eme ihe a na-aghaghị imenye ụjọ, na ọ ga-enwe obi iru ala mgbe ọ kwụsịrị ọchịchọ ya.
Etu esi anwale enyi ma mara ezigbo nwunye ya
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ inyocha ụdị enyị gị bụ, ajụkwala onwe gị ajụjụ, kama gakwuru ha. Naanị ka gị na ya kwurị okwu a, ruo mgbe ị na-agaghị echegbu onwe gị banyere omume ya. Gwa ya okwu ogologo oge ọ bụla. Nyochaa obi ya mgbe a na-agba ajụjụ ọnụ. Ọ bụrụ na ihe ọ hụrụ na-agbanahụ ya, ọ bụrụkwa na ọ na-eme ihe kpasuru gị iwe, gọnye ya enyi ma ọ bụ gbachi nkịtị, ma elepụla anya. Kpọkọtanụ ike gị mgbe ị na-akọwara ya okwu, azaghachi ya na mbuso agha, asọgidela ya, emehiela ya, oge eziokwu ya adaghị eme, yabụ 'Mmadụ agaghị agbanahụ onye kpebiri ya.
Nke mkpa inwe obiọma
Mee ihu gị ka ọ bụrụ ìhè nke oge ịdị adị gị. Ihe si n'ụlọ nkwakọba ihe apụtaghị ọzọ. Ọ bụ achịcha maka nkesa nke onye dị ụkọ. Onye nke afọ ya bụ ihe efu bụ onye na-ebo ebubo, onye na-anọkarị n'ọchịchị bụ onye na-eme ihe ike. Emela ka otu n'ime ndị ikwu gị. Obiọma bụ ncheta nke nwoke, maka afọ ndị na-abịa mgbe ike gwụsịrị.
Nke ọ dị mkpa inwe agwa dị mma, nke kwụsiri ike na nke rụzuru
Mara ndị nọ n'akụkụ gị na ngwongwo gị ga - adịru; emela ka ndi enyi gi ghara idi ike; Ha bụ akụ na-akwụ ụgwọ nke na-enweta iju mmiri, ọ dị mkpa karịa akụnụba ya. N'ihi na ngwongwo nke otu nwere ike ịdaba na nke ọzọ. Àgwà nke nwa nke mmadụ ga-abaara ya uru; ihe okike zuru oke ga-abụ ihe ncheta.
Nke mkpa ịta ahụhụ na ịlụ ọgụ megide ihe ọjọọ
N'ịbụ ndị a na-ata ahụhụ, na-akụzi ihe nile, omume ịkwụsị ihe ọjọọ ga-abụ nguzobe nke omume ọma. N'ihe ọjọọ, ma e wezụga n'ihi ọdachi, nke a bụ ihe na-eme ka onye na-egbu maramara ghọọ onye na-eme ihe ike.
Obi uto ịlụ nwanyị nwere obi ụtọ
Ọ bụrụ na ị lụrụ nwanyị nke bara ọgaranya, obi ụtọ na obi ma mara ndị bi n'obodo ya, na ọ na-erubere iwu abụọ. Mee ya mma n'oge kwesiri ya; unu kewapu onwe unu n'ebe ya no, ma mee ka o zue ya. Nwanyị obi nwere obi ụtọ na-eweta nhazi.
Nke nnyefe nke amamihe, ihe ọmụma na ezi omume
Ọ bụrụ na ị gere ntị na ntụpọ ndị m gwara gị, atụmatụ gị niile ga-aga n'ihu. Ezi obi ha bụ akụ na ụba ha; ncheta ha na-abanye n'ọnụ ndị mmadụ n'ihi ọdịdị zuru oke nke nkwupụta okwu ha. Anyị ga-ezipụ okwu ọ bụla ka ọ ghara ịla n'iyi na mba a. Ka enwee ike ịmepụta ihe dị mma maka ndị ọma ka ndị ọkwá na-ekwu banyere ya. Ọ bụ ịkụziri nwoke ihe ọ ga-agwa ụmụ ya. Onye na-ege ntị, ọ na-aghọ onye omenkà mgbe ọ na-ege ntị. Ọ dị mma ịzụlite ụmụ; ọ ga-anụ nke ahụ. Ọ bụrụ na onye nlekọta na-enye ezi ihe nlereanya, ọ ga-adị irè ruo mgbe ebighị ebi. ọ bụ onye maara ihe nke na-echegbu onwe ya na ikike ya maka ịkwanye ya, na-achọpụta ihe ya site na ihe na-eme ya n'ikpeazụ. N'ihi ya, obi dị ya ụtọ n'ụwa. Onye maara ihe maara ihe n'ihi ihe ọ maara, na ndị mara mma n'ihi ụzọ o si eme ihe. Ka obi ya chịkwaa ire ya, ka egbugbere ọnụ ya bụrụ onye ezi omume mgbe ọ na - ekwu okwu, ihe anya ya hụrụ, otú ntị ya si dị ụtọ ịnụ ihe bara uru nye nwa ya nwoke. Onye na-eme ezi omume bụ onye ụgha.
Nke mkpa ige ntị na nghọta
Ọ na-enye aka ige nti nwa nwoke na-ege ntị. O b ur u na ige nt i na-ege nt i n'ebugh i onye na-ege nt i, onye na-ege nt i na-an o. Mgbe nge ntị dị mma, okwu ahụ dị mma. Onye na-ege ntị bụ onye isi nke ihe bara uru, nge ntị bara uru nye onye na-ege ntị. Ige nti di nma karia ihe nile, amu ihu zuru oke. Lee ka o si dị mma nwa nwoke ịnakwere ihe nna ya kwuru. Onye na-enye ozi a, ọ ga-eru nnukwu afọ. Onye Chineke huru n'anya bu onye nuru; Chineke na-akpọ onye na-anụghị ya asị. Ọ bụ obi na-amụ nna ya ukwu dika onye na-anụ ma ọ bụ onye na-anụghị. Nye nwoke, obi ya bụ ndụ, ọganihu, ahụike. Ọ bụ onye na-ege ntị na-anụ ihe a na-ekwu, onye na-enwe mmasị ịnụ onye na-eme ihe a na-ekwu. Lee ka nwa nwoke si rubere nna ya isi! Dị ka ọ na-enwe obi ụtọ maka onye a gwara ya: "nwa nwoke, ọ dị mma, dịka onye nwere ikike ige ntị". Onye na-ege onye na-agwa ya ntị na, ọ ga-edozi obi ya ma gọzie nna ya. Ncheta ya ga-anọgide n'ọnụ ndị dị ndụ nọ n'ụwa na ndị ga-anọ n'ebe ahụ.
Nke nwa ime mmụọ
Ọ bụrụ na nwa nke mmadụ anabata ihe nna ya kwuru, ọ dịghị atụmatụ ya ga-ada. Mee ka nwa gị nwoke mara onye na-ege ya ntị; n'ime obi ndị a ma ama, ọ ga-abụ nwoke nwere àgwà, onye a pụrụ ịtụkwasị obi, onye ga-eduzi ọnụ ya dị ka ihe e kwuworo, onye a ga-ahụ dị ka onye na-anụ. Nzọụkwụ nke nwa nwoke, onye bụ nwoke nwere ntụkwasị obi àgwà, dị ịrịba ama. Njehie ahụ abanye na onye na-egeghị ntị. Onye maara ihe na-ebili n'ụtụtụ ka ọ nọgide na-enwe nguzozi, ebe ndị na-amaghị ama nọ n'ọnụ mmiri.
Nke ndị na-amaghị ihe
Maka ndị na-amaghị ihe na-egeghị ntị, ọ gaghị eme ihe ọ bụla. Ọ na-ele ihe ọmụma anya dị ka amaghị ihe, bara uru dị ka ihe na-emerụ ahụ Ọ na-eme ihe arụ niile, nke mere na iwe were ya kwa ụbọchị. Ọ na-adị ndụ na ihe na-eme ka ọ nwụọ, nri ya bụ okwu gbagọrọ agbagọ. Nke a bụ njirimara nke ndị a ma ama ghọtara, ya bụ onye nwụrụ anwụ kwa ụbọchị. A ga-ewepụ omume ya n'ihi ọtụtụ nsogbu ndị mere ya kwa ụbọchị.
Nke ọrụ na akara aka nke nwa ime mmụọ
Nwa nwoke nke nuru bụ onye na-eso ụzọ Horus ma ọ dị mma maka ya mgbe ọ nụsịrị. Mgbe o mere agadi, ọ na-enweta ọnọdụ nke ngọzi. Ka o site n'aka ya mee ka umu ya kwusawara ya otu ozi ahu. Nwoke obula natara nkuzi dika omume ya si di; ka o gosiputara umu-ya, ka ha we gwa umu-ha okwu. Characterdị agwa, enyela nnwere onwe ịhapụ mbibi, mee ka ezi omume sie ike, mkpụrụ gị ga-adịkwa ndụ. Banyere onye nke mbụ ga-abịa na-eweta ọgba aghara, ka ndị ikom ahụ kwuo ihe ha ga-ahụ: "nke a bụ ihe kwekọrọ na ajọ onye a!" ". Ka a gwara ndị ga-ege ntị: "Nke a bụ ihe kwekọrọ na nke a wretch!" Mee ka onye obula huru ha ma igwe mmadu gha adi n'udo. Enweghị ha, akụnụba agaghị enweta.
Nke okwu ziri ezi
Ezula ohi okwu ma ghara iwebata ya, etinyela otu ihe n'ọnọdụ onye ọzọ, lezie anya ka ị kụjie ihe dị n'ime gị, lezie anya ihe onye maara ihe kwuru, sị: "gee ntị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịnwụ n'ọnụ ọnụ ndị na-anụ, na-ekwu okwu nanị mgbe ịchọtala njide nke ọrụ ahụ; ọ bụrụ na ị na-ekwu n'ụzọ dị irè, ụzọ ndụ gị ga-adịzie.
Kpoo onwe gị n’ime obi gị, na-achịkwa ọnụ gị, ọnọdụ gị ga-adịkwa n’etiti ndị a ma ama. Ka ihe akaebe zuru oke n’iru onye nwe gi. Mee ihe mere o ji sị: “Onye a bụ nwa nwoke,” ka ndị ga-egekwa ntị kwuo nke a: “Obi ụtọ na-adịrị onye mụrụ ya! " Debe obi gị mgbe ị na-ekwu okwu, kwuo okwu dị elu, ka ndị a ma ama na-ege ntị wee kwuo, sị: “Lee ka ihe si si n’ọnụ gị pụta nke ukwuu! "
Nke nwa nwoke dị larịị
Mee ka nna gi ukwu kwuo banyere gi: "Ot'u ihe ka emere onye natara nkuzi nke nna ya, mgbe o siri na ya puta; ọ gwara ya okwu mgbe ọ nọ n'afọ nne ya nile; ihe ọ rụzuru karịrị ihe a gwara ya. Lee, ezigbo nwa bụ onyinye nke chi, onye na-eme ihe karịrị ihe ndị nna ya nyere ya; ka o me ezi omume, ka obi ya me dika o si bia, ka i na-abiakutem, na aru aru.
Papyrus Prisse Studies: Akwụkwọ nke Kaqimna na Ihe Mmụta nke Ptah-Hotep (Ochie edemede)
Zụta € 14,86
Oge emelitere ikpeazụ na February 27, 2021 8:44
Na kaadị (Video)
N'afe ihu oke - Akwụkwọ edemede (2012)